Madaxweynaha Soomaaliya oo ku wajahan Qardho. | Puntland Vision
Madaxweynaha Soomaaliya oo ku wajahan Qardho.
January 10, 2018 By News Desk Leave a Comment
Madaxweynaha dawlada federalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa saaka ku wajahan magaalada Qardho ee xarunta gobolka Kar-kaar.
Shacabka magaalada Qardho ayaa saakadii hore isugu soo baxay Banaanka magaalada Iyagoo lulaya calanka Soomaaliya iyo halku dhigyo ay kusoo dhawaynayaan madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo.
Ammaanka magaalada Qardho ayaa aad oo adkeeyey waxaana sidoo kale la hakiyey isku socodka Gadiidka inta madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdigiisu ay marayaan wadooyinka Magaalada Qardho.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa sidoo kale waxaa lagu wadaa inta uu joogo magaalada Qardho inuu booqasho ku tago wadooyinka laga hirgaliyey degmada Qardho iyo sidoo kale Goobaha dalxiiska ee Qardho.